HomeFariimo JaceylFarqiga U Dhexeeya Saaxiibtinimada & Jacaylka
caashaqa Fariimo Jaceyl, Wararka Maanta 0
Waxa jira farqi weyn oo u dhexeeya jacaylka & Saaxiibtinimada waxana ay dadka badan intooda badan aaminsanyihiin in ay Xambaarsanyihiin isku macno laakiin waxa jira farqi weyn oo u dhexeeya labada dareen ee saaxiibtinimada iyo jacaylka.
Marka aad qof ula dhaqmayso saaxiibtinimo waxa ay ka dareen duwantahay marka aad qof ula dhaqamayso jacayl sidaas darteed waxa aan ka hadli doonaa farqiga u dhexeeya jacaylka & Saaxibtinimada.
Saaxiibtinimadu waa xiriir bulsho oo ka dhexeeya laba qof ama in ka badan waxayna ku saleysan tahay kalgacal iyo wada shaqeyn ka dhexeysa, waana xiriir bulsho oo dhow oo waara oo ku saleysan isbarbardhiga guud ahaan, iyo sida uu qabo cilmi-nafsigi.
Jacaylku waa dareen soo jiidasho iyo xushmeyn qofka ama shay gaar ah, saynisyahannaduna waxay u arkaan inay tahay is-weydaarsiga kiimikada ee u dhexeeya labada qof, Waxaa la sheegay in ay tahay nooc shucuur ah oo loo tarjumay qaab dareen xoog leh, Daraasado taxane ah oo laga sameeyay cilmu-nafsiga waxay muujiyeen in jacaylku ku bilowdo dareen ka dhex-dhaca laba qof.
Farqiga u dhexeeya jacaylka iyo saaxiibtinimada:
Ka dib markaan ogaanay macnaha labada saaxiibtinimo iyo jacayl, maxay yihiin faraqa u dhexeeya? Cilmi-nafsi-yaqaannada ayaa ogaaday in jacaylka saaxiibnimadu ay isaga mid yihiin dhinacyo badan laakiin ay ku kala duwanyihiin waxyaabo badan oo aas-aasi ah tas oo jacaylka ka dhigaysa mid qoto-dheer iyo xasilloon.
Astaamaha caanka ah ee jacaylka iyo saaxiibtinimada isaga midka yihiin ayaa ah ku raaxaysiga iyo Aqbalida qof kale sida uu yahay waliba adiga oo Ixtiraamaya hadii uu saaxiibkaa yahay ama jecelyahay isaga oo u fidinaya caawimo ama ula dhaqmaya si fiican, waliba ku kalsoon yahay qofka kale.
Hadaba Halkan Hoose Kaga Bogo Farqiga u dhexeeya jacaylka & Saaxiibtinimada:
1.Mahadcelinta: ayaa la macno ah in qofka wax jecel uu dareen gaar ah siiyo qofka uu jecelyahay waliba mar walba ku dadaalo in uu Ka garab dhawaado.
2.Kali Ahaansho: tan ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee Jacaylku kaga duwan yahay Saaxiibtinimada waana mid xidhiidhka ku haysa kalinimo iyo waliba in ay isku khaas noqdaan laba qof.
3.Difaac & ilaali: Arintan ayaa ah difaacida danaha jacaylka iyo waliba in uu helo wado fiican oo uu ku caawiyo qofka uu jecelyahay.
4 Tiir Oo Muhiim Ah Oo Aad Xidhiidh Xoogan Kula Dhisi Karto Qofka Aad Jeceshahay.
Sababaha Ay Dumarku U Jecelaadaan Ragga Ka Da’da Weyn